हवाइजहाज दुर्घटनाको दुखद इतिहास– कुन विमान कहाँ कहिले भए दुर्घटना ?
६९ वर्षीय इतिहासमा ८५ विमान दुर्घटना, ६५५ को गयो ज्यान, हवाइ जहाजीय रुट अझै छैनन् वैज्ञानिक किन ?
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । सोमबार सवा २ बजेतिर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलको आकासमा एउटा दुखद दुर्घटना भयो । युएस बंगला विमानको दुर्घटनासम्म जोड्दा नेपालमा दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका मध्ये यो दुर्घटना ८५ औं दुर्घटना हो ।
तर, मानवीय क्षतिका हिसाबले त्रिभुवन विमानस्थलमै भएको दुर्घटना मध्ये चाहिँ यो पहिलो दुर्घटनाका रुपमा दर्ज भएको छ ।
नेपालमा वायु सेवा सुरु भएको लगभग ७ दशक मात्रै टेक्दै छ ।
यो ६९ वर्षीय इतिहास हेर्दा विमान वायु सेवाको तथ्यांक निकै नै दुखलाग्दो छ । ७ दशकमा ७ दर्जन बढी अर्थात् ८५ ओटा विमान दुर्घनामा परेका छन् । नेपाली आकाशमा आजसम्म ६५५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
आन्तरिक विमान दुर्घटना बाहेक नै अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरु पनि दुर्घटनामा परेका छन् । सोमबार युएस बंगला विमान दुर्घटना परेपछि नेपालमा दुर्घटना हुने अन्तर्राष्ट्रिय विमानको संख्या ८ पुगेको छ ।
सोमबार भएको युएस बंगला बाहेकै, यस अघि सन् २०१५ टर्किस एयरलाइन्सको त्रिभुवन विमानस्थलमा नै दुर्घटना भएको थियो । तर, उक्त दुर्घटनामा भने कसैको ज्यान गएको थिएन ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमान दुर्घटना पर्दा सबै यात्रुको सकुशल उद्धार भएको त्यो पहिलो घटना थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमान दुर्घटनाबाट आजसम्म कतिको गयो ज्यान ?
अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा सुरु गरेदेखि आजसम्म नेपालमा ८ ओटा विमानहरु दुर्घटनाग्रस्त भएका छन् । अन्तरराष्ट्रिय विमान दुर्घटनामा परेर सोमबारको उक्त घटना सहित आजसम्म ३५९ जनाको ज्यान गएको तथ्यांकले बताउँछ ।
युएस बंगला विमान दुर्घटना पर्नुअघि ३११ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।
नेपालमा विदेशी उडानको इतिहास हेर्दा पहिलोपटक सन् १९४९ मा चार सिट क्षमता रहेको बोन्यान्जा वीचक्राफ्टा ल्यान्ड भएको थियो ।
तर, विदेशी जहाज दुर्घटनाको इतिहास हेर्दा पहिलोपटक सन् १९५५ को फेब्रुअरी ८ मा अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स कालिंगा एयर सिमरामा दुर्घटना भएको थियो ।
त्यस दुर्घटनामा २ जनाको ज्यान गएको थियो । एकको सकुशल उद्धार गरिएको थियो । नेपालमा नै दर्ता भएको जहाज भने सन् १९६१ मे ११ भैरहवामा पहिलो पटक दुर्घटना भएको थियो ।
जसमा ४ को ज्यान गएको थियो ।
त्यसपछि सन् १९५६ मेमा इन्डियन एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना भयो, जसमा १४ को ज्यान गएको थियो । १९ जनाको सकुशल उद्धार गरिएको थियो ।
सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय विमान दुर्घटनाको इतिहास हेर्दा सन् १९९२ मा भएको तथ्यांकले बताउँछ । १९२२ को सेप्टेम्बरमा पाकिस्तान एयरलाइन्सको विमान भट्टेडाँडामा दुर्घटना हुँदा १५७ को ज्यान गएको थियो ।
१९५८ (सन्) मा इन्डियन एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना भएको थियो । यस दुर्घटनामा विमानमा सवार २० सै जनाको ज्यान गएको थियो ।
सन् १९९२ को जुलाइमा नुवाकोटको ग्याङ्देफेदीमा थाई एयरवेजको जहाज दुर्घटना भयो । विमानमा सवार ११३ कै ज्यान गएको थियो । सन् १९९९ मा लुफ्थान्साको कार्गाे विमान दुर्घटनामा गर्दा ५ को जीवन स्वाहा भएको थियो ।
सोमबार भएको युएस बंगला बाहेकै, सन् २०१५ टर्किस एयरलाइन्सको त्रिभुवन विमानस्थलमा नै दुर्घटना भएको थियो ।
तर, उक्त दुर्घटनामा भने कसैको ज्यान गएको थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय विमान दुर्घटना पर्दा सबै यात्रुको सकुशल उद्धार भएको त्यो पहिलो घटना थियो ।
आन्तरिक उडानमा कतिले गुमाए ज्यान ?
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको हवाई सुरक्षा महाशाखा प्रमुख सुरेश आचार्यले निर्माण सञ्चारलाई दिउको जानकारी अनुसार आन्तरिक उडानका विमान दुर्घटनाबाट आजसम्म २९६ को ज्यान गएको छ ।
पहिलो हवाइ दुर्घटना, र क्रमशः
पर्यटन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ६ अक्टोबर १९७३ मा नेपालमा पहिलो हवाई दुर्घटना भएको थियो । त्यस्तै, जुन ९ १९९१ मा पनि नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज दुर्घटनामा परेको थियो ।
काठमाडौंबाट लुक्लाको लागि उडानमा रहेको सो विमान दुर्घटनामा चालक दलका तीन सदस्यसहित १४ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
३१ जुलाई, १९९२ मा थाइ एयरलाइन्सको विमान काठमाडौंमा अवतरण गराउने क्रममा पहाडमा ठोक्किएर दुर्घटना भएको थियो । दुर्घटनामा विमानमा सवार एक सय १३ जनाको ज्यान गएको थियो ।
त्यस्तै, २८ सेम्टेम्बर, १९९२ मा थाइ एयरलाइन्स दुर्घटनाको दुई महिना नपुग्दै फेरि नेपाली आकासमा अर्को विमान दुर्घटना भएको थियो ।
पाकिस्तान एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा १६७ जनाको ज्यान गएको थियो। ए थ्री हण्ड्रेड एयर बस पहाडमा ठोक्किएर दुर्घटनाग्रस्त हुन पुगेको थियो ।
धावन मार्गमै दुर्घटना भएमध्ये, नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज १७ जनवरी, १९९५ मा दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
काठमाडौंबाट रुम्जाटार जाने क्रममा सो विमान धावन मार्गमा दुर्घटनामा परेको थियो ।
त्यसरी नै, नेकोन एयरको विमान सेप्टेम्बर ५, १९९९ मा पोखराबाट काठमाडौंसम्मको उडानको क्रममा दुर्घटनाम परेको थियो ।
यो विमानमा चालक दलका सदस्यसहित १५ जनाको ज्यान गएको थियो ।
सन् २००४ २५ मइ महिनामा काठमाडौंबाट लुक्ला जान लागेको यति एयरलाइन्सको डि एच सी सीक्स थ्री हन्ड्रेड नाइन एन एफ डी ट्वीनअटर विमान लुक्ला विमानस्थल नजिक लाम्जुरा पहाडमा ठोकिएर दुर्घटना भएको थियो ।
धावन मार्गमै दुर्घटनाग्रस्त हुनेमा– १ अक्टोबर, २००४ मा सीता एयरवेजको विमान लुक्ला विमानस्थलमा दुर्घटना भएको थियो । विमानस्थलको धावन मार्ग नै अवरुद्ध हुने गरी भएको यो दुर्घटनामा मानवीय क्षति भने भएन ।
धावन मार्गमै दुर्घटनाग्रस्त हुनेमा– गोरखा एयरलाइन्सको विमान सन् जुन ३० तारिखका दिन लुक्ला विमानस्थलमा धावनमार्गमा धसिएर दुर्घटनाग्रस्त हुँदा चालक दलका तीन र नौ जना यात्रु घाइते हुन पुगेका थिए ।
त्यस्तै, यती एयरलाइन्सको विमान अवतरण गर्ने क्रममा सन् २००८ अक्टोबर ८ मा आगलागी भएर दुर्घटना भएको थियो, दुर्घटनामा ८ जनाको ज्यान गएको थियो भने आठ जनाको सकुशल उद्धार गरिएको थियो ।
त्यस्तै, अगस्त २४, २०१० मा अग्नी एयरको विमान मकवानपुरमा दुर्घटनामा परेको थियो यो विमान दुर्घटनामा विमानमा यात्रारत १४ जनाको ज्यान गएको थियो ।
त्यसरी नै, तारा एयरको विमान सन् २०१० डिसेम्बर १६ तारिखमा दुर्घटनामा परेको थियो । लामिडाँडाबाट काठमाडौं आउँदै गरेको सो विमान ओखलढुङ्गाको श्रीचौर, मानेडाडाँमा ठोक्किएर दुर्घटनामा परेको थियो । दुर्घटनामा बाइस जना यात्रुको ज्यान गएको थियो ।
त्यसरी नै, सन् २०११ सेप्टेम्बर २५ का दिन ललितपुरको विशंखु नारायणमा बुद्ध एयरको जहाज दुर्घटनामा परेको थियो । दुर्घटनामा विमानमा सवार सबै १९ जना यात्रुकै ज्यान गएको थियो ।
यसरी नै, सन् २०१२, सेप्टेम्बर २८ तारिखका दिन सीता एयरको विमान दुर्घटनामा परेको थियो ।
काठमाडौंबाट सोलुको लुक्लाका लागि उडेको यो विमान मनोहरा किनारमा खस्दा विमानमा रहेका सबै १९ जनाको मृत्यु हुन पुगेको थियो ।
त्यस्तै, अग्नी एयरको विमान जोमसोमबाट पोखरा आउने क्रममा विमानस्थल नजिकैको डाँडामा ठोक्किएर सन् २०१३, १४ मेमा दुर्घटनामा परेको थियो ।
दुर्घटनामा चालक दलका तीन सदस्य सहित सबै १६ यात्रुको ज्यान गएको थियो ।
यसैगरी, सन् २०१४ फेब्रुअरी १६ तारिखमा काठमाडौँबाट जुम्लाका लागि उडेको नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज दुर्घटनामा पर्दा १८ को ज्यान गएको थियो ।
पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको यो तारा एयरको विमान सन् २०१६, फेब्रुअरी २४ तारिखमा दुर्घटना हुँदा २३ जनाको ज्यान गएको थियो ।
मगलबार, २९ फागुन ०७४